> Resource> Android> otú nyefee Ndi ana-akpo si Nokia ka Moto X
Dị nnọọ na-esi gị ahaziri Motorola Moto X ekwentị? Ikekwe, ị chọrọ nyefee kọntaktị site na gị ochie Nokia ekwentị na ya, otú i nwere ike ịkọrọ gị obi ụtọ na ndị enyi gị ozugbo. Otú ọ dị, ajụjụ ndị bụ olee otú ị pụrụ nyefee kọntaktị site na abụọ dị iche iche n'elu ikpo okwu? Ọ bụrụ na kọntaktị na-adịghị ọtụtụ, ị nwere ike idezi ha otu otu na gị onwunwu Moto X ekwentị. Ma, gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ narị kọntaktị? N'ụzọ doro anya, ọ bụ otú ahụ a nnukwu ọrụ.
Jiri ya nwayọọ. Nyefee kọntaktị site Nokia ka Moto X pụrụ ịbụ nnọọ mfe, mgbe ị Wondershare MobileTrans. Dị ka ọkachamara ekwentị kọntaktị transfer ngwá ọrụ, ọ na-enye gị ohere iji nyefee kọntaktị niile na gị Nokia ekwentị Moto X na otu Pịa. ọ bụghị nanị na transfer nọmba ekwentị, ma detuo keukwu ozi dị ka adreesị ozi-e, companys aha na ọrụ aha.
Mfe nzọụkwụ nyefee kọntaktị site Nokia ka Moto X
Download free ikpe version nke MobileTrans idetuo kọntaktị site Nokia ka Moto X.
Cheta na: Wondershare MobileTrans arụ ọrụ zuru okè na ekwentị Nokia na-agba ọsọ Symbian 40, Symbina 60 na Symbian ^ 3, Windows 8 na Windows 8.1. Ego nkọwa ndị ọzọ banyere akwado Nokia igwe.
Nzọụkwụ 1: Wụnye na-agba ọsọ MobileTrans na kọmputa
Nke mbụ niile, wụnye na-agba ọsọ ekwentị transfer ngwá ọrụ na kọmputa. Bụ isi window egosi elu.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ Moto X na Nokia na kọmputa
Jikọọ ma gị Nokia na Moto X igwe na kọmputa site na eriri cables. MobileTrans Ga chọpụta ha n'otu ntabi anya. Mgbe ahụ, ekwentị Nokia gị ga-emere na ekpe ebi ndụ nke bụ isi window. Na Moto X-egosi na nri ebi ndụ. N'etiti ha bụ "tụgharịa" button. Pịa ya na ebe nke ekwentị abụọ ga-interchanged.
Dị ka "Doro Anya data tupu oyiri", ọ na-eji na-enyere gị aka efu gị Moto X maka ịzọpụta data si Nokia. Ego nke Uncheck ya, dika gị nhọrọ.
Nzọụkwụ 3: Nyefee Nokia kọntaktị na Moto X
Dị ka ị na-ahụ, kọntaktị, ozi ederede, music, video na foto nwere ike zigara gị Moto X na oge. N'ihi ya, uncheck igbe tupu ederede ozi, foto na music.
Cheta na: Ọ bụrụ na lekwasịrị Nokia ekwentị bụ Windows usoro, biko ndabere kọntaktị na OneDrive na ekwentị gị mbụ. Mgbe ahụ Mobiletrans pụrụ ịkwado iji weghachi ndabere kọntaktị na lekwasịrị android ekwentị.
Ugbu a, ọ bụ oge. Pịa "Malite Copy". MobileTrans Ga-amalite kọntaktị nyefe. Ihe niile ị chọrọ ime bụ na-ekwentị abụọ ejikọrọ oge niile. Mgbe ọ mere, pịa "OK" na-akwụsị ndị na kọntaktị nyefe.
Gbalịa MobileTrans ime Nokia ka Moto X kọntaktị transfer!